musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Chitsva Chikafu Kurangarira: Charcuterie Fortin brand Salami
Charcuterie L. Fortin Ltée. iri kurangarira Charcuterie Fortin brand Salami kubva kumusika nekuti inogona kunge iine gorosi risingaziviswe pachiratidzo. Vanhu vane allergies kune gorosi kana vane chirwere checeliac kana zvimwe zvinokanganisa zvine chekuita negluten havafanirwe kudya chigadzirwa chakayeukwa chinotsanangurwa pazasi.
Chigadzirwa chinotevera chatengeswa muQuebec.
muchiso chigadzirwa zera UPC Codes
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Charcuterie Fortin Salami 175 d 6 28555 04100 4 Zvakanakisisa Pamberi
Tarisa uone kana iwe uine chiyeuchidzo chigadzirwa mumba mako. Zvigadzirwa zvinorangarirwa zvinofanirwa kukandwa kunze kana kudzoserwa kuchitoro kwazvakatengwa.
Kana iwe uine allergies kune gorosi kana uine chirwere checeliac kana zvimwe zvinokanganisa zvine chekuita negluten, usadya chigadzirwa chakayeukwa sezvo chingakonzeresa zvakakomba kana kutyisidzira hupenyu.
• Dzidza zvakawanda pamusoro pehutano hwezvokudya zvinowanzoitika
Uku kuyeuka kwakakonzerwa nekambani. ICanadaan Food Inspection Agency (CFIA) iri kuitisa ongororo yekuchengetedza chikafu, izvo zvinogona kutungamira kurangarirwa kwezvimwe zvigadzirwa. Kana zvimwe zvigadzirwa zvine njodzi zvakanyanya zvikarangarirwa, iyo CFIA inozivisa veruzhinji kuburikidza neyakagadziridzwa Kudya Kurangarira Yambiro.
Pakave pasina kwakaitika maitiro ane chekuita nekudyiwa kwechigadzirwa ichi.